2015-09-06 ~ ELS, English Language School (Kyaukroe Village) (အင်္ဂလိပ်စာ စာသင်ကျောင်း (ကျောက်ရိုးရွာ)
Verbs and Verbs Forms
BBC/ VOA English
Compound Sentences (ပေါင်းစပ်ဝါကျများ)
6:09 AM | No Comments |
Compound Sentences (ပေါင်းစပ်ဝါကျများ) အပိုင်း (၁)
Compound Sentences (ပေါင်းစပ်ဝါကျများ) ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လို Sentence (ဝါကျမျိုး)ကို Compound Sentence (ပေါင်းစပ်ဝါကျ)ဟုခေါ်သနည်း။ Compound Sentences (ပေါင်းစပ်ဝါကျများ)ဟူသည် Simple Sentence (ရိုးရိုးဝါကျ) နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုသော ဝါကျတို့ကို Coordinator Conjunctions သို့မဟုတ် Connective Adverbs တို့ဖြင့် ဝါကျတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ဖွဲ့စည်းရေးစပ်ထားသော ဝါကျများကို Compound Sentences (ပေါင်းစပ်ဝါကျများ)ဟုခေါ်တယ်။ Simple Sentence ကို Independent Clause ဟုလည်းခေါ်ကြ၏။ ဥပမာ - Subject + Verb + Objective / Complement
(I love her. I'mastudent.)
Compound Sentences (ပေါင်းစပ်ဝါကျများ)ကိုရေးဖွဲ့ရာတွင် Coordinator Conjunctions သို့မဟုတ် Connective Adverbs သို့မဟုတ် Punctuation သက်သက်ဖြင့်ရေးဖွဲ့နိုင်တယ်။
အောက်ပါ Compound Sentences (ပေါင်းစပ်ဝါကျများ) ကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ Independent Clause တို့အား Underline ဖြင့်ပြထားတယ်။ Bold ဖြင့်ပြထားသည့် အပိုင်းကိုတော့ Coordinator Conjunctions သို့မဟုတ် Connective Adverbs သို့မဟုတ် Punctuation တစ်ခုခုဟုမှတ်သားပါ။
1. I saw no one in the room, so I didn't go in.
အခန်းထဲတွင် ဘယ်သူ့ကိုမှကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် အထဲသို့မဝင်ခဲ့ပါဘူးဗျ။ (အခန်းထဲတွင်ဘယ်သူ့ကိုမှ မတွေ့မြင်ရခဲ့သောကြောင့် ကျွန်တော်အထဲသို့မဝင်ခဲ့ပါ။)
2. I saw no one in the room; therefore, I didn't go in.
အခန်းထဲတွင် ဘယ်သူ့ကိုမှကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် အထဲသို့မဝင်ခဲ့ပါဘူးဗျ။
3. I saw no one in the room; I didn't go in.
အခန်းထဲတွင် ဘယ်သူ့ကိုမှကျွန်တော်မမြင်ခဲ့လို့ အထဲသို့မဝင်ခဲ့ပါဘူးဗျ။
အထက်ပါ Compound Sentences သုံးမျိုးတို့တွင် I saw no one in the room. နှင့် I didn't go in. တို့ဟာ Independent Clause နှစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ နံပါတ် (၁) ဝါကျကို So ဟူသော Conjunction ဖြင့်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ so ဆိုတဲ့ Conjunction အနားမှာ ကပ်လျက် Comma (,) ထည့်ထားတာကိုသတိပြုပါ။ နံပါတ် (၂) ဝါကျကိုတော့ therefore ဆိုတဲ့ Conjunctive Adverbနဲ့ဆက်ထားတယ်။ therefore ဆိုတဲ့ စကားဆက်ရဲ့ရှေ့တွင် Semicolon (;) ထည့်ထားပြီး ၄င်းရဲ့ စကားဆက်ရဲ့နောက်တွင် Comma (,) ထည့်ပြီးရေးထားတာကို အထူးသတိထားပါ။ နောက်ဆုံးဝါကျ နံပါတ် (၃) မှာတော့ Independent clause နှစ်ခုရဲ့ကြားတွင် semicolon (;) တစ်ခုတည်းအသုံးပြု၍ရေးဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါလည်းပဲ Compound Sentence ပဲဖြစ်တယ်။
Compound Sentences တို့ကိုရေးဖွဲ့ရာတွင် And - Type, But - Type, Or- Type, and So-Type ဟု ယေဘုယျမှတ်သားကြရအောင်။
(and - နှင့်၊ ၍။ but - သို့ရာတွင်၊ ဒါပေမယ့်။ or - ဒါမှမဟုတ်၊ သို့မဟုတ်၊ သို့ရာတွင်။ so - ဒါကြောင့်၊ ထိုကြောင့်။ အဲဒါကြောင့်။)
ဒါမဟုတ်ရင် ဒါဖြစ်ရမယ် စသည့်သဘောဆောင်က or-type ဖြင့်ဆက်ပါ။ ဥပမာ - တစ်ခုခုကို တတ်အပ်မသိဘူး။ ဒီဥစ္စာက "ရွှေဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ငွေ ဖြစ်မယ်" စသည်ဖြင့် ဝိုးတိုးဝါးတားဖြစ်နေရင်ပေါ့။
ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်က but-type ဖြင့်ဆက်ပါ။ ဥပမာ - "နေမကောင်းဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျောင်းကိုသွားရတယ်" စသည်ဖြင့်။
အကြောင်းကြောင့် အကျိုးတစ်ခုဖြစ်ရင် so-type ဖြင့်ဆက်ပါ။ ဥပမာ - "သူမဟာ စာကျက်ဖို့ပျင်းခဲ့တယ်။ အဲဒါကြောင့် စာမေးပွဲကျခဲ့တယ်" စသည် စသည်ဖြင့်။
အထက်ပါသဘောထားမသက်ရောက်ပါက and-type ဖြင့်ဆက်ပါ။ ဥပမာ - "ကျွန်တော်က ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်စာပြနေတယ်" ။
And-Type ဖြင့်ဆက်တဲ့ Compound Sentences တွေကိုလေ့လာကြစို့။ ဝါကျတိုင်းကို ဘာသာပြန်လို့တော့ မပေးတော့ဘူး။ နမူဝါကျတွေလောက်ပဲရေးပေးသွားပါမယ်။
and - နှင့်၊ ၍။
both ......and .... နှစ်ခု/နှစ်ယောက်စလုံး။
not only ...... but also ..... သာမဟုတ် .... လည်းပဲ။
I don't feel like going to that party. ပါတီပွဲကိုသွားချင်စိတ်မရှိဘူး။
I haveabad cold. ကျွန်တော် တော်တော့်ကို အအေးမိနေတယ်။
>> I don't feel like going to that party, and I haveabad cold. (Compound Sentence)
One part of the TV screen carried the tennis game. တွီဗွီဖန်သားပြင်တစ်ဘက်က တင်းနစ်ပွဲပြနေတယ်။
The other part showed the game show. အခြားတစ်ဖက်ခြမ်းမှာတော့ ပြိုင်ပွဲတွေပြနေတယ်။
>>> One part of the TV screen carried the tennis game, and the other part showed the game show. (Compound Sentence)
The young man needsacar for his work. ဒီလူငယ်မှာ အလုပ်အတွက် ကားတစ်စီးလိုအပ်နေတယ်။
He is going to buy one right away. သူဟာ အခုပဲကားတစ်စီးသွားဝယ်တော့မယ်။
>> The young man needsacar for his work, and he is going to buy one right away. (Compound Sentence)
He agreed. သူကသဘောတူတယ်။
I agreed.ကျွန်တော်က သဘောတူတယ်။
>>> Both he and I agreed. (Compound Sentence)
(Subject နှစ်ခု (he နှင့် I) ကို both..and နှင့်ဆက်ထားသည်။ and နှင့်လည်း ဆက်နိုင်သည်။ ဥပမာ - He and I agreed.)
She can write Japanese. သူမဟာ ဂျပန်စာကိုရေးတတ်တယ်။
She can speak Japanese. သူမဟာ ဂျပန်စကားပြောတတ်တယ်။
>>> She can both write and speak Japanese. (Compound Sentence)
(Verb နှစ်လုံး (write နှင့် speak) ကို both ... and နှင့်ဆက်ထားသည်။)
He has lived in Britain. သူဟာ ဗြိတိန်မှာနေဖူးတယ်။
He has lived in America. သူဟာ အမေရိကမှာနေဖူးတယ်။
>>> He has lived in both Britain and America. (Compound Sentence)
(Place (နေရာပြပုဒ်) နှစ်ခု (Britain နှင့် America) ကို both...and နှင့်ဆက်ထားသည်။)
Not only ....... but also....
He read the book. သူဟာ စာအုပ်ဖတ်နေတယ်။
He remembered what he read. သူဖတ်ခဲ့သမျှကို သူကမှတ်မိနေတယ်။
>>> He not only read the book but also remembered what he read. (Compound Sentence)
(Verb နှစ်လုံး (read နှင့် remembered) နှစ်လုံးကို not only....but also နှင့်ဆက်ထားသည်။)
2. Conjunctive Adverbs
besides - မှတစ်ပါး။ ၄င်းအပြင်။ ထို့အပြင်။
moreover - ထို့အပြင်။ သာမက။
in addition - ထို့အပြင်။ လည်းပဲ။
furthermore - ထို့အပြင်။
He was tired. သူက မောနေပြီ။
He was hungry. သူဟာ ဗိုက်ဆာနေပြီ။
>>> He was tired; besides, he was hungry.
>>> He was tired; moreover, he was hungry.
>>> He was tired; in addition, he was hungry.
>>> He was tired; furthermore, he was hungry.
I. Coordinate Conjunctions
but - သို့ရာတွင်။ ဒါပေမယ့်။
yet - သို့ရာတွင်။ ဒါပေမယ့်။
while - စဉ်တွင်။ သို့ရာတွင်။
whereas - စင်စစ်ကတော့။ သို့ရာတွင်။
He tried to tell her the truth. သူသည် သူမအားအမှန်တရားးကိုပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
She din't listen to him. သူမဟာ သူပြောတာကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူး။
>>> He tried to tell her the truth, but she didn't listen to him. (Compound Sentence)
He struggled. သူသည် အလွန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။
He failed. သူဟာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတယ်။
He struggled, but he failed. (Compound Sentence)
She isafunny girl. သူမဟာ ကြောင်တောင်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပဲ။
You can't help admiring her. ခင်ဗျားဟာ သူမကို မလေးစားပဲ (မခင်မင်ပဲ) မနေနိုင်ပါဘူး။
>>> She isafunny girl, yet you can't help admiring her. (Compound Sentence)
You like sports. ခင်ဗျားက အားကစားကိုကြိုက်တယ်။
I would rather read. ကျွန်တော်ကတော့ စာဖတ်တာကိုပိုကြိုက်တယ်။
>>> You like sports, while I would rather read. (Compound Sentence)
They wantedahouse. သူတို့က အိမ်တစ်လုံးလိုချင်ခဲ့ကြတယ်။
We would rather live inaflat. ငါတို့ကတော့ တိုက်ခန်းနဲ့နေရတာကိုပိုကြိုက်တယ်။
>>> They wantedahouse, whereas we would rather live inaflat. (Compound Sentence)
II. Conjunctive Adverbs
however - သို့သော်လည်း။
nevertheless - သို့ပါလျက်။ သော်ငြားလည်း။ သို့သော်လည်း။
on the other hand - အခြားတစ်ဖက်မှာတော့။
His first response was to say no. သူ့ရဲ့ပထမဆုံးတုန့်ပြန်မှုက မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။
He changed his mind. သူ့စိတ်က ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။
>>> His first response was to say no; however, he changed his mind. (Compound Sentence)
The sun is shining. နေပူနေတယ်။
I'm sure it will rain. မိုးရွာလိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။
>>> The sun is shining; nevertheless, I'm sure it will rain. (Compound Sentence)
Sunlight is good for health. နေရောင်ခြည်ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါတယ်။
Too much sunlight may cause illness. အလွန်အကျွံနေပူချိန်ကတော့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပါယ်။
>>> Sunlight is good for health; on the other hand, too much sunlight may cause illness.
ဒီနေ့အတွက် သင်္ခန်းစာကတော့ ဒီလောက်ပါပဲနော်။ နောက်ထပ် Compound Sentence နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင်္ခန်းစာတွေကိုလည်း ဆက်လက်တင်ပေးပါအုံးမယ်။ အဲဒီအခါကျရင် လေ့ကျင့်တွေကိုပါ တင်ပေးပါ့မယ်။ ဘဝပန်းတိုင်း တက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ။
Advanced Level, Compound Sentences, English Grammar
Buying an Airplane Ticket, Airport and Passport! English and Burmese phrases
1.) Where’s the airport?
လေဆိပ် က ဘယ်နေရာမှာလဲ။
2.) How do I buyaticket?
3.) Where do I buyaticket?
a. လက်မှတ် ဘယ်နေရာမှာဝယ်ရမလဲ။
4.) You can buyaticket online. It’s easy.
Online မှာ ဝယ် လိုက် ပါ။ သိပ် လွဲတယ်။ လွဲလွဲလေး ပဲ။
5.) Should I getaone way ticket oraround trip ticket?
လက်မှတ် က အသွားတွက် ဝယ် ရ မလား။
အသွားအပြန် ဝယ် ရမလား။
6.) How much is it?
7.) I’m buyingaround trip ticket.
ကြေးမုံ က အသွားအပြန် လက်မှတ် ကို ဝယ် မှာ။
a. First class , business class or economy class
ဒီ လက်မှတ် က ပထမတန်း လက်မှတ်လာ။
ဒါမှာမဟုတ် Business class လက်မှတ်လာ။
ဒါမှာမဟုပ် ရိုးရိုးတန်း လက်မှတ် လာ။
8.) ကြေးမုံ ရဲ့ လက်မတ် က ရိုးရိုးတန်း ပဲ။
Economy class ပဲ။
9.) I’m inarush. My flight leaves in an hour.
အရေးကြီးနေတယ်။ ကြေးမုံ ရဲ့ လေယာဉ်က တစ်နာရီမှာ ဆိုရင် ထွက် မှာ။
10.) Is your flight domestic or international?
လေယာဉ် က ပြည်တွင်း လာ၊ ပြည် ပ လာ။
11.) How long do I have to wait before boarding?
လေယာဉ် ပေါ် တက် ဖို့ ဘယ် လောက် ကြာစောင့် ရမလဲ။
12.) Remember to bring your passport.
Passport ယူလာဖို့ မမေ့ နဲ့ နော်။
Daily Spoken English, General English
Window Shopping and Retail Therapy
8:54 PM | No Comments |
1.) I’m havingabad day. It’s just one of those days where nothing is going my way! I’m just upset.
ဒီနေ့ က တော့ ကြေးမုံ အတွက် ကောင်းတဲ့ နေ့ မဟုပ်ဘူး ။ တစ်ခု မှ ကြေးမုံ စိတ်တိုင်းကျ မ ဖြစ်ဘူး။ ကြေးမုံ စိက်မကောင်းဘူး။
မ ကောင်းတဲ့ နေ့ ။
2.) Oh…. Look at that dress. I could do some retail therapy. Shopping is called retail therapy because when you shop and buy things you like, it improves your mood. I get happier when I buy something I like.
အိုး အဲဒီ ဂါဝန် ကို ကြည့် လုိုက် ပါ လာ။ သိပ် လှတာပဲ။ ကြေးမုံ retail therapy လုိုတယ်။ တစ်ခုခု ဝယ် လိုက် ရ ရင်း ၊စိတ်ရွှင်လာတယ်။ ကြေးမုံ ပို ပျော်လာတယ်။
စိတ် ချမ်း သာ အောင် ဈေးဝယ်မယ်။
စိတ် သက် သာ အောင် ဈေးဝယ်ဖို့ လုပ်မယ်။
dress = ဂါဝန်
Retail therapy စိတ် ချမ်းသာ အောင် ဈေးဝယ်တာ။
Shop / buy ဝယ် တယ်။
mood = စိတ် နေ စိတ် ထား ။
2.) I need some retail therapy, but I can’t afford that. It’s too expensive. I’m broke! I have no money. Maybe I can just do some window- shopping.
ကြေးမုံ retail therapy လုိုတယ် ၊ဒါပေမယ် ကြေးမုံ မ ဝယ်နိုင်းဘူး။ အရမ်း ဈေးကြီတယ်။ ကြေးမုံ က broke . ကြေးမုံ က ပိုက်ဆံ မ ရှီဘူး။ ကြေးမုံ window shopping ပဲ လုပ်နိုင်တယ် ထင်တယ်။ ကြေးမုံ က ဘိုင်ကျတယ်။
Broke – no money –
ပိုက်ဆံ မ ရှီဘူး။
Window shopping = ကြည့် ရုံ ပဲ ကြည့် တ်ယ ၊ မ ဝယ် ဘူး။
4.) Window shopping is when you’re looking at the goods and dresses in the shops, but you’re not going to buy them. I’m window shopping today. (sigh*)
Window shopping က ပစစည်း တွေ၊ အဝတ်အစားတွေ ကို ဆိုင် ထဲ မှာ ပဲ ကြည့် ရုံ ပဲ ကြည့် တယ်၊ဒါပေမယ် မ ဝယ် ဘူး။ ကြေးမုံ ဒီနေ့ window shopping လုပ်နေတယ်။ ဘာမှ မဝယ်ဘူး။ ကြည့် ပဲ ကြည့်မှာ။
5.) Well, at least I can afford my nice lunch and enjoy the day. This isn’t too bad at all.
အနည်းဆုံး တော့ ကြေးမုံ နေ့လယ်စာ ဝယ် ခားနိုင်တယ်။ ကြေးမုံ နေ့ က သိပ် မ ဆိုး ဘူး ပေါ့။
6.) Oh, what is this? A sale! 90% off!?!? Unbelievable!
ဟော ကြည့် စမ်း!!!! A sale?!? လျှော့ ဈေး တဲ့။ ဈေးတွေ က ကျ နေ ပြီ ။ မယုံနိုင်စရာပဲ။
7.) I know I said I’m broke, but when there’sasale – and it’s 90% off, you just have to take advantage and buy the whole store! It’sasteal!
ကြေးမုံ သိတယ်။ ကြေးမုံ ပိုက်ဆံ မ ရှီဘူး ပြောလုိုက် တယ်၊ ဒါပေမယ့် ၉၀ ရာနှုန်း တောင်မှာ ကျ ရင်၊ ဒါက အခွင့် ကောင်းပဲ။ တစ် ဆိုင် လုံ တောင်ဝယ် သင့်တယ်။ အလကား ရ သလိုပဲ။
8.) Wow. Retail therapy definitely worked.2things that I love hearing – “ I love you” and “ 90% off!”! Wow, I had suchagood day! What an amazing day!
Retail therapy က ကောင်းလိုက် တာ၊ အလုပ် လဲ ဖြစ်တယ်။ “ ၉၀ ရာနှုန်း” လျှော့တယ် ဆို တာ ကြားရရင် “ ချစ်တယ်” လို့ အပြော ခံ ရ သလိုပဲ။
ဖုန်းနဲ့အလွယ်တကူဖတ်ဖို့>> Download APK
Adverb to Adjective
Direct/ Indirect Objective
Five Kinds of Noun
Plural / Singular Nouns
Plural / Singular Verbs
Reading VOA News
Seven Kinds of Adjectives
Special Verbs with Adjectives
Two Kinds of Noun
နာမဝိသေသန (၇) မျိုး
နာမ် (၂) မျိုး
နာမ် (၅) မျိုး
နာမ်စား (၈) မျိုး
အသုံးများသော အင်္ဂလိပ်စကားလုံး ၁၅၀၀ (A-Z)
Buying an Airplane Ticket, Airport and Passport! E...
အင်္ဂလိပ်စာသင်ကျောင်း - ကျောက်ရိုးရွာ
Leave Something For Me
Copyright © ELS, English Language School (Kyaukroe Village) (အင်္ဂလိပ်စာ စာသင်ကျောင်း (ကျောက်ရိုးရွာ) | Powered by Blogger